ကျောဖီရဲ့ စိတျဝငျစားဖှယျ အကွောငျးအရာမြား။ – SoShwe
Home/Other/ကျောဖီရဲ့ စိတျဝငျစားဖှယျ အကွောငျးအရာမြား။
ကျောဖီရဲ့ စိတျဝငျစားဖှယျ အကွောငျးအရာမြား။
admin February 24, 2022	Other Leaveacomment
တဈနကေို့ ကျောဖီ (၃) ခှကျသောကျမယျဆိုရငျ အသကျရှညျရှညျနရေမယျလို့ လလေ့ာတှရှေိ့ခကျြတှအေရ သိရှိရပါတယျ။ သငျ့အနနေဲ့ ကျောဖီကို ကွိုကျလို့ပဲဖွဈစေ၊ မကွိုကျလို့ပဲဖွဈစေ ကျောဖီမှာတော့ ဆှဲဆောငျမှုရှိတဲ့ အကွောငျးအရာလေးတှေ ရှိပါတယျ။
၁။ အဒေီ ၈၀၀ သို့ ပွနျရောကျသှားသလို ခံစားရခွငျး။
ဘီစီ (၉) ရာစုလောကျက ဆိတျကြောငျးသားတှဟော သူတို့ဆိတျတှကေနတေဈဆငျ့ ကဖငျးရဲ့ အကြိုးသကျရောကျမှုကို သိရှိခဲ့ကွပါတယျ။ ထိုအခြိနျက ဆိတျတှဟော ကျောဖီပငျ၊ ကျောဖီစတှေ့ကေို စားသုံးပွီးနောကျ တဈခြိနျလုံး “ က ” နခေဲ့ကွတယျ။ ဒသေခံ ဘုနျးတျောကွီးတဈပါးမှလညျး ကျောဖီစကေို့ ဖြျောသောကျပွီးနောကျပိုငျး အိပျမပြျောတာကို သတိထားမိခဲ့ပွီး ထိုအခြိနျမှစတငျကာ ကျောဖီဆိုတာ စတငျဖွဈပျေါလာပါတယျ။
၂။ ကျောဖီဆိုတာ တကယျတမျးတော့ အသီးဖွဈခွငျး။
ကျောဖီသီးတှဆေိုတာ ခယျြရီသီးတှေ၊ ဘယျရီသီးတှကေဲ့သို့ အပငျမှာပေါကျတကျသော အသီးတဈမြိုးပဲ ဖွဈပါတယျ။
၃။ ကျောဖီကို အသီးလို စားသုံးခွငျး။
အစောပိုငျးအခြိနျတုနျးက လူတှဟော ကျောဖီသီးကို နို့နဲ့ရောပွီး အာဟာရအစားအစာအဖွဈ သုံးဆောငျခဲ့ကွပါတယျ။
၄။ ကျောဖီတှငျ အဓိကအမြိုးအစား (၂) မြိုးရှိခွငျး။
Arabica နဲ့ Robusta ဆိုပွီး ကျောဖီအမြိုးအစား (၂) မြိုးရှိကာ သီးနှံစိုကျပြိုးသူတှအေနနေဲ့ Arabica မြိုးစကေို့ ပိုပွီး စိုကျပြိုးကွပါတယျ။ Robusta ရဲ့အရသာဟာ အခါးလှနျကဲပွီး ကဖငျးဓာတျ ပိုမိုမြားပွားသောကွောငျ့ လူနညျးစုကသာ ကွိုကျနှဈသကျကွပါတယျ။
၅။ ကမ်ဘာပျေါမှာ ကျောဖီကို အမြားဆုံး စိုကျပြိုးတဲ့နိုငျငံ။
အပွညျပွညျဆိုငျရာ ကျောဖီအဖှဲ့ခြုပျရဲ့ ထုတျပွနျကွငွောခကျြအရ ဘရာဇီးဟာ ကမ်ဘာ့နိုငျငံအနှံ့အပွားကို ကျောဖီအမြားဆုံး ထောကျပံ့ပေးနတေဲ့နိုငျငံဖွဈပွီး ဒုတိယနရောမှာရှိတဲ့ ဗီယကျနမျထကျ နှဈဆပိုမိုမြားပွားပါတယျ။
၆။ အမရေိကနျ၌ ပွညျနယျနှဈခုတညျးတှငျသာ ကျောဖီစိုကျပြိုးလို့ရခွငျး။
Kona အမြိုးအစား ကျောဖီဟာ အမရေိကနျထုတျ ကျောဖီပဲဖွဈပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ ကျောဖီဟာ ကမ်ဘာ့အီကှတောလမျးကွောငျး (နသှေားရာလမျးကွောငျး) လို ပူပွငျးတဲ့ နရောဒသေတှမှောသာ စိုကျပြိုးနိုငျလို့ပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဟာဝိုငျအီရာသီဥတုဟာ ရိတျသိမျးလို့ရတဲ့ ကောကျပဲသီးနှံတှအေတှကျ အကောငျဆုံးရာသီဥတုဖွဈပွီး ကယျလီဖိုးနီးယားမှာလညျး ကျောဖီပငျတှကေို စတငျစိုကျပြိုးလာကာ ကျောဖီစြေးကှကျသို့ ဝငျရောကျလာပွီ ဖွဈပါတယျ။
၇။ ကမ်ဘာ့စြေးအကွီးဆုံး ကျောဖီ။
ကမ်ဘာ့စြေးအကွီးဆုံးကျောဖီကိုတော့ တဈပေါငျ ဒျေါလာ (၆၀၀) ကြျောပေးပွီး ဝယျယူလို့ ရနိုငျပါတယျ။
၈။ ကျောဖီသောကျသုံးခွငျးကို တားမွဈပိတျပငျခဲ့ကွခွငျး။
၁၅၁၁ ခုနှဈလောကျက ဆျောဒီနိုငျငံ မက်ကာဟျမှာ ဘာသာရေးအစှနျးရောကျအတှေးအချေါတှနေဲ့ ကျောဖီသောကျသုံးခွငျးကို ပိတျပငျခဲ့ပါတယျ။ ၁၆ ရာစုနှဈတုနျးကလညျး အီတလီမှာ ဘုနျးတျောကွီးတဈခြို့က ကျောဖီကို တာမွဈပိတျပငျခဲ့ကွပွီး အကွောငျးရငျးကတော့ ကျောဖီကို မကောငျးမှုဒုစရိုကျလို့ သတျမှတျခဲ့ကွလို့ပဲဖွဈပါတယျ။ သို့သျောလညျး ပုပျရဟနျးမငျးကွီး Clement VI မှ ကျောဖီကို အလှနျအမငျးကွိုကျနှဈသကျသဖွငျ့ တားမွဈထားတာကို ပယျဖကျြပွီး ၁၆၀၀ ခုနှဈမှာ တရားဝငျ ကောငျးခြီးပေးခဲ့ပါတယျ။
၉။ ကျောဖီကို လှနျကဲစှာ သောကျသုံးခွငျး။
စိတျမပူပါနဲ့။ သငျ့အနနေဲ့ အခြိနျတိုအတှငျးမှာ ကျောဖီ အခှကျ (၃၀) ကြျော သောကျသုံးမှသာ ကဖငျးဓာတျလှနျကဲပွီး အသကျဆုံးရှုံးနိုငျတာပါ။
၁၀။ ကမ်ဘာပျေါမှာ ကျောဖီအမြားဆုံး သောကျသုံးသောနိုငျငံ။
အပွညျပွညျဆိုငျရာ ကျောဖီအဖှဲ့ခြုပျရဲ့ ကွငွောခကျြအရ အရှယျရောကျပွီးသား ဖငျလနျနိုငျငံသားတှဟော တဈနှဈကို ကျောဖီ (၂၇.၅) ပေါငျ သောကျသုံးကွတယျလို့ သိရှိရပါတယျ။
၁၁။ ကျောဖီသောကျသုံးသူတှဟော အသကျရှညျရှညျနရေခွငျး။
တဈရကျကို ကျောဖီ (၃) ခှကျကနေ (၄) ခှကျအထိ သောကျသုံးသူတှဟော အသကျရှညျရှညျနရေပွီး နှလုံးသှေးကွောကဉျြးရောဂါ၊ ဆီးခြိုရောဂါနဲ့ ခွလေကျတုနျရီခွငျးရောဂါတို့ကိုလညျး လြော့ကစြပေါတယျ။
၁၂။ ကမ်ဘာ့အကွီးဆုံး ကျောဖီခှကျ။
အမွငျ့ပေ (၉) ပရှေိပွီး ဂါလံပေါငျး (၃၄၈၇) ဝငျဆံ့တဲ့ ကျောဖီခှကျကွီးဟာ ၂၀၁၂ ခုနှဈက ကမ်ဘာ့အကွီးဆုံး ကျောဖီခှကျအဖွဈ ဂငျးနဈစံခြိနျဝငျခဲ့ပါတယျ။
၁၃။ ကျောဖီဆိုတဲ့ အချေါအဝျေါဖွဈပျေါလာပုံ။
ကျောဖီဆိုတဲ့စကားလုံးဟာ အာရဗီလို “ Wine ” ဆိုတဲ့ အချေါအဝျေါကနေ စတငျ ဆငျးသကျလာတာဖွဈပါတယျ။ တူရကီမှာတော့ အရငျက “ Qahwah ” လို့ ချေါတှငျခဲ့ပွီးနောကျပိုငျးမှာတော့ “ Kahveh ” လို့ ပွောငျးလဲချေါတှငျလာပါတယျ။ ထို့နောကျ နယျသာလနျမှာတော့ “ Koffie ” လို့ချေါတှငျခဲ့ပွီး ယခုလို “ Coffee ” ဆိုတဲ့ စကားလုံး ဖွဈပျေါလာခဲ့ပါတယျ။
၁၄။ တဈရကျကို ကျောဖီဆိုငျ (၂)ဆိုငျနှုနျး နစေ့ဉျဖှငျ့နတေဲ့ Starbucks
Starbucks ဟာ တဈကမ်ဘာလုံးမှာ ကျောဖီဆိုငျပေါငျး (၂၉၀၀၀) ကြျော ဖှငျ့လှဈပွီးသှားပွီပဲ ဖွဈပါတယျ။
ကော်ဖီရဲ့ စိတ်ဝင်စားဖွယ် အကြောင်းအရာများ။
တစ်နေ့ကို ကော်ဖီ (၃) ခွက်သောက်မယ်ဆိုရင် အသက်ရှည်ရှည်နေရမယ်လို့ လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေအရ သိရှိရပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ ကော်ဖီကို ကြိုက်လို့ပဲဖြစ်စေ၊ မကြိုက်လို့ပဲဖြစ်စေ ကော်ဖီမှာတော့ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေ ရှိပါတယ်။
၁။ အေဒီ ၈၀၀ သို့ ပြန်ရောက်သွားသလို ခံစားရခြင်း။
ဘီစီ (၉) ရာစုလောက်က ဆိတ်ကျောင်းသားတွေဟာ သူတို့ဆိတ်တွေကနေတစ်ဆင့် ကဖင်းရဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို သိရှိခဲ့ကြပါတယ်။ ထိုအချိန်က ဆိတ်တွေဟာ ကော်ဖီပင်၊ ကော်ဖီစေ့တွေကို စားသုံးပြီးနောက် တစ်ချိန်လုံး “ က ” နေခဲ့ကြတယ်။ ဒေသခံ ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးမှလည်း ကော်ဖီစေ့ကို ဖျော်သောက်ပြီးနောက်ပိုင်း အိပ်မပျော်တာကို သတိထားမိခဲ့ပြီး ထိုအချိန်မှစတင်ကာ ကော်ဖီဆိုတာ စတင်ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။
၂။ ကော်ဖီဆိုတာ တကယ်တမ်းတော့ အသီးဖြစ်ခြင်း။
ကော်ဖီသီးတွေဆိုတာ ချယ်ရီသီးတွေ၊ ဘယ်ရီသီးတွေကဲ့သို့ အပင်မှာပေါက်တက်သော အသီးတစ်မျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၃။ ကော်ဖီကို အသီးလို စားသုံးခြင်း။
အစောပိုင်းအချိန်တုန်းက လူတွေဟာ ကော်ဖီသီးကို နို့နဲ့ရောပြီး အာဟာရအစားအစာအဖြစ် သုံးဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။
၄။ ကော်ဖီတွင် အဓိကအမျိုးအစား (၂) မျိုးရှိခြင်း။
Arabica နဲ့ Robusta ဆိုပြီး ကော်ဖီအမျိုးအစား (၂) မျိုးရှိကာ သီးနှံစိုက်ပျိုးသူတွေအနေနဲ့ Arabica မျိုးစေ့ကို ပိုပြီး စိုက်ပျိုးကြပါတယ်။ Robusta ရဲ့အရသာဟာ အခါးလွန်ကဲပြီး ကဖင်းဓာတ် ပိုမိုများပြားသောကြောင့် လူနည်းစုကသာ ကြိုက်နှစ်သက်ကြပါတယ်။
၅။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ကော်ဖီကို အများဆုံး စိုက်ပျိုးတဲ့နိုင်ငံ။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကော်ဖီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်အရ ဘရာဇီးဟာ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအနှံ့အပြားကို ကော်ဖီအများဆုံး ထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီး ဒုတိယနေရာမှာရှိတဲ့ ဗီယက်နမ်ထက် နှစ်ဆပိုမိုများပြားပါတယ်။
၆။ အမေရိကန်၌ ပြည်နယ်နှစ်ခုတည်းတွင်သာ ကော်ဖီစိုက်ပျိုးလို့ရခြင်း။
Kona အမျိုးအစား ကော်ဖီဟာ အမေရိကန်ထုတ် ကော်ဖီပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကော်ဖီဟာ ကမ္ဘာ့အီကွေတာလမ်းကြောင်း (နေသွားရာလမ်းကြောင်း) လို ပူပြင်းတဲ့ နေရာဒေသတွေမှာသာ စိုက်ပျိုးနိုင်လို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဟာဝိုင်အီရာသီဥတုဟာ ရိတ်သိမ်းလို့ရတဲ့ ကောက်ပဲသီးနှံတွေအတွက် အကောင်ဆုံးရာသီဥတုဖြစ်ပြီး ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာလည်း ကော်ဖီပင်တွေကို စတင်စိုက်ပျိုးလာကာ ကော်ဖီဈေးကွက်သို့ ဝင်ရောက်လာပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
၇။ ကမ္ဘာ့ဈေးအကြီးဆုံး ကော်ဖီ။
ကမ္ဘာ့ဈေးအကြီးဆုံးကော်ဖီကိုတော့ တစ်ပေါင် ဒေါ်လာ (၆၀၀) ကျော်ပေးပြီး ဝယ်ယူလို့ ရနိုင်ပါတယ်။
၈။ ကော်ဖီသောက်သုံးခြင်းကို တားမြစ်ပိတ်ပင်ခဲ့ကြခြင်း။
၁၅၁၁ ခုနှစ်လောက်က ဆော်ဒီနိုင်ငံ မက္ကာဟ်မှာ ဘာသာရေးအစွန်းရောက်အတွေးအခေါ်တွေနဲ့ ကော်ဖီသောက်သုံးခြင်းကို ပိတ်ပင်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၆ ရာစုနှစ်တုန်းကလည်း အီတလီမှာ ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ချို့က ကော်ဖီကို တာမြစ်ပိတ်ပင်ခဲ့ကြပြီး အကြောင်းရင်းကတော့ ကော်ဖီကို မကောင်းမှုဒုစရိုက်လို့ သတ်မှတ်ခဲ့ကြလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး Clement VI မှ ကော်ဖီကို အလွန်အမင်းကြိုက်နှစ်သက်သဖြင့် တားမြစ်ထားတာကို ပယ်ဖျက်ပြီး ၁၆၀၀ ခုနှစ်မှာ တရားဝင် ကောင်းချီးပေးခဲ့ပါတယ်။
၉။ ကော်ဖီကို လွန်ကဲစွာ သောက်သုံးခြင်း။
စိတ်မပူပါနဲ့။ သင့်အနေနဲ့ အချိန်တိုအတွင်းမှာ ကော်ဖီ အခွက် (၃၀) ကျော် သောက်သုံးမှသာ ကဖင်းဓာတ်လွန်ကဲပြီး အသက်ဆုံးရှုံးနိုင်တာပါ။
၁၀။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ကော်ဖီအများဆုံး သောက်သုံးသောနိုင်ငံ။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကော်ဖီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ကြေငြာချက်အရ အရွယ်ရောက်ပြီးသား ဖင်လန်နိုင်ငံသားတွေဟာ တစ်နှစ်ကို ကော်ဖီ (၂၇.၅) ပေါင် သောက်သုံးကြတယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။
၁၁။ ကော်ဖီသောက်သုံးသူတွေဟာ အသက်ရှည်ရှည်နေရခြင်း။
တစ်ရက်ကို ကော်ဖီ (၃) ခွက်ကနေ (၄) ခွက်အထိ သောက်သုံးသူတွေဟာ အသက်ရှည်ရှည်နေရပြီး နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ၊ ဆီးချိုရောဂါနဲ့ ခြေလက်တုန်ရီခြင်းရောဂါတို့ကိုလည်း လျော့ကျစေပါတယ်။
၁၂။ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ကော်ဖီခွက်။
အမြင့်ပေ (၉) ပေရှိပြီး ဂါလံပေါင်း (၃၄၈၇) ဝင်ဆံ့တဲ့ ကော်ဖီခွက်ကြီးဟာ ၂၀၁၂ ခုနှစ်က ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ကော်ဖီခွက်အဖြစ် ဂင်းနစ်စံချိန်ဝင်ခဲ့ပါတယ်။
၁၃။ ကော်ဖီဆိုတဲ့ အခေါ်အဝေါ်ဖြစ်ပေါ်လာပုံ။
ကော်ဖီဆိုတဲ့စကားလုံးဟာ အာရဗီလို “ Wine ” ဆိုတဲ့ အခေါ်အဝေါ်ကနေ စတင် ဆင်းသက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ တူရကီမှာတော့ အရင်က “ Qahwah ” လို့ ခေါ်တွင်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ “ Kahveh ” လို့ ပြောင်းလဲခေါ်တွင်လာပါတယ်။ ထို့နောက် နယ်သာလန်မှာတော့ “ Koffie ” လို့ခေါ်တွင်ခဲ့ပြီး ယခုလို “ Coffee ” ဆိုတဲ့ စကားလုံး ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။
၁၄။ တစ်ရက်ကို ကော်ဖီဆိုင် (၂)ဆိုင်နှုန်း နေ့စဉ်ဖွင့်နေတဲ့ Starbucks
Starbucks ဟာ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ ကော်ဖီဆိုင်ပေါင်း (၂၉၀၀၀) ကျော် ဖွင့်လှစ်ပြီးသွားပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Previous အသကျငယျငယျရှယျရှယျနဲ့ ဆံပငျတှဖွေူလာတဲ့ ပွဿနာအရငျးအမွဈကဘာဖွဈမလဲ ? ? ?
Next တဈကိုယျတျော မိုငျပေါငျး ၁၃,၅၀၀ ကြျော ခရီးနှငျခဲ့တဲ့ သဘာဝပတျဝနျးကငျြ ထိနျးသိမျးစောငျ့ရှောကျသူတဈဦး။